१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले अबको एक महिनाभित्र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन सुरू हुने दावी गरेको छ । शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुक्रबार दिउँसो बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको निरीक्षण गर्न पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले अब कुनैपनि बहानामा आलटाल नगरी तोकिएकै समयमा फोहोर व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन पनि दिएका दिए ।
हाल फोहोर बिर्सजन भैरहेको सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको निरीक्षण गरेपछि उनी बञ्चरे ल्याण्डफिल साइटको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए ।
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बञ्चरे ल्याण्डलफिल साइटमा निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी लिँदै उनले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मंसिर १५भित्र फोहोर बिर्सर्जन गर्न मिल्नेगरी काम सक्न कडा निर्देशन दिए ।
लुम्बिनी–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभिका प्रतिनिधि डम्बरबहादुर न्यौपानेले मंसिर १ गतेबाट फोहोर बिर्सजन गर्न मिल्नेगरी अन्तिम काम भइरहेको जानकारी गराए।
‘तपाईंले धेरै पटक भाका फेरि सक्नुभएको छ, अब मंसिर १५ गतेबाट फोहोर बिसर्जन गर्न मिल्नेगरी तयारी गर्नुस्’–प्रगतिको निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
काठमाडौ र ललितपुर दुई महानगर सहित उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुने ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न लिचेड पाखरीको निर्माण भैरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत केही दिनभित्रै फोहोर बिसर्जन गर्न मिल्नेगरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठ निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिन अकस्मात बञ्चरेडाडा पुगेका थिए ।
मन्त्रीसँगै मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल, उपमहानिर्देशक प्रद्मकुमार मैनाली सहितको टोली निरीक्षण गर्न पुगेका थिए ।
सरकारको महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा रहेको सो ल्याण्डफिल साइटमा करिब सय वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्नेछ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक गेलालले फोहोर वर्गीकरण नगरी बिसर्जन गर्दा २५ र वर्गीकरण गर्दा करिब सय वर्षसम्म ढुक्कसँग फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने जानकारी दिए । सरकारले विभागलाई ल्याण्डफिल साइटमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
‘अब फोहोर बिसर्जन गर्न स्थानबाट लिचेड पोखरीसम्म पुग्ने ह्युम पाइप राख्ने र लिचेड पोखरी निर्माण गर्न मात्र बाँकी छ,’–महानिर्देशक गेलालले भन्नुभयो ।
सचिव डा. सिहले मन्त्रीको निर्देशन अनुसार तोकिएको समयमा फोहोर व्यवस्थापन हुने बताए । विभागले हालसम्म करिब ४० करोड रुपिया खर्च गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार र दोस्रो चरणको लागि ४६ करोड ५ लाख ९४ हजार रुपियाको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । पहिलो चरणको निर्माण सम्झौता बैशाख २२ सम्म थियो ।
लुम्बिनी–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभिले निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि विभागले यही कातिक २२ गतेसम्म म्याद थपेको थियो । दोस्रो चरणको निर्माण ठेक्का कालिका कन्ट्रक्सनले पाएको थियो । सो कम्पनीले आगामी जेठ १९ भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले कोभिड–१९को स्वाथ्यजन्य समस्याको कारणले कामदार र निर्माण समाग्री आपूर्तिमा कठिनाई, सिसडोलमा फोहोरको पहिरो गई आगमन अबरुद्ध भएको र कोल्पुखोलामा वर्षातमा बाढी आएर निर्माणमा प्रभावित भएको जनाएको छ ।
१३ वर्षदेखि सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको भ्याली १ र २ फोहोर बिसर्ज भइरहेको थियो । दैनिक १ हजार १ सय मेट्रिक टन फोहोर बिसर्जन हुने सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मात्र दैनिक करिब ७ सय मेट्रिक टन फोहर बिसर्जन भैरहेको छ ।
बिसं २०६२ सालमा २ वर्षको लागि मात्रै फोहर व्यवस्थापन गर्न मिल्लेगरी मात्र सिसडोल ल्याण्डफिल साइट तयार गरेको थियो । लगत्तै दिर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापन बञ्चरेडाडामा गर्न १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
जाइकाले सो ल्याण्डफिल साइट सन् २००९ सम्ममा सम्पन्न हुने जनाएको थियो।जाइकाले कन्सेप्चुयल डिजाइन तयार गरेको ११ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले २०६२ सालमै तीन वर्षभित्र बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार तयार पारेर २०६५ सालबाट फोहोर ब्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । लगत्तै एकदशक अघि बञ्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइटको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
Categories Select Category Auto (576) Blog (3) English (1,347) Entertainment (660) Finance (1,278) Nepali (14,330) Sports (9,595) Tech (2,530) World (4,600)